Kurumidza Kukurumidza T shirt Printer China Manufacturer
Tsanangudzo:T Shirt Kubudisa Bhizinesi,Mifananidzo yokudhinda yekupfeka,Kurumidza T Shirt Kudhinda
Home > Products > Digital Printer > T shirt Printer > Kurumidza Kukurumidza T shirt Printer
Mushandi Wekurumidza Kutsva T Tema iyo inonyatsoziva pfungwa yechokwadi yechinyorwa chimwe chete chinyorwa, pasina kupinza mapapiro, iyo inonzi spray yakaoma, yakazara mifananidzo yakazara zvachose. Shandisa iI UV, kunze kweT-shirt, inoshandiswa kune zvinyorwa zvose zvemufananidzo uye mifananidzo inogona kuve nemirasi yakanamana yakadhindwa neChiefs Printing Machine , yakadai se: Phone case Leather, Glass, Label .Metal.Crystal.KT Board.Acrylic.PVC. ABS.EVA.Plastic.Mobile Power.Stone.U disk.Silica gel nezvimwe zvinhu, pashure pokudhinda, printout inopesana zvikuru nekupfeka.scrape.alcohol scrub.waterproof.fade-resistant. T Shirt Shinyorwa Bhizinesi isu inyanzvi yekugadzirwa kwemaoko mumaoko ekupenda, marudzi ose ekudhinda kushandiswa, shanduro yekunyora magetsi. Kutungamira Kumapfeko (DTG) T-Shirt kudhinda kana Quick T Shirt Kubudisa inzira yekudhinda mifananidzo yakazara-pavara pazvipfeko. DTG inogona kushandiswa pamucheno kana kuti mutsvuku.
The Clothes Printing Machine is a type of inkjet michina yepamusoro-tech inogadzira zvinhu zvisingasviki, iyo inoshandiswa inzvimbo yakawanda kwazvo, iyo inyanzvi mune zvishandiso muhuni hwemaoko, marudzi akawanda ekudhinda, kushandiswa kwekanyoro yekunyora. Nhengo isina chikonzero inochengetedza mushure mekudhinda, inogona kuchengetedza munhu, kana mushure mekunyorwa kwakanyatsonaka, kunopesana nekupfeka, kupera, kunwa doro, mvura isina kuchena; hazvizogadziri musoro wepamusoro kana iwe usingashandisi mishonga 1 mwedzi, mari inodhura yakazara. Inonyatsoziva pfungwa yechokwadi yechinhu chimwe chete chinyorwa, pasina kubatiza, chizere chemufananidzo wakave wakapera.
Izvi ndizvo zvakananga ku Garment Printer process yekudhinda, nyore nyore kudzidza, tine nyika yekutengeswa kwemashure kuti titsigire iwe.
A3 Format Tshirt Printer Kutengeswa Bata Ikozvino
T Shirt Kubudisa Bhizinesi Mifananidzo yokudhinda yekupfeka Kurumidza T Shirt Kudhinda T Shirts Kudhinda T Shirt Printer Machine T Shirt Printing Machine T Shirt Printer Machine Price T Shirt Printing Machine Price